Ireo Fonja Miafina Amerikana: Miainga Avy Amin’ny Efitranonà Hotely Mankamin’ny Efitrano Fanagadrana Maharikoriko · Global Voices teny Malagasy
Ireo Fonja Miafina Amerikana: Miainga Avy Amin'ny Efitranonà Hotely Mankamin'ny Efitrano Fanagadrana Maharikoriko
Voadika ny 14 Mey 2018 12:02 GMT
(Fanamarihana: lahatsoratra nivoaka tamin'ny Oktobra 2006)
Rehefa nanamafy ny filoham-pirenena George W. Bush tao anatin'ny kabary nataony tamin'ny Septambra 2006 fa nametraka drafitra fanagadrana miafina any amin'ny tany vahiny ny CIA, nasehon'ny governemantan'ny Etazonia ho toy ny ampahan'ireo ezaka ataony mba “hitondrana ireo mpampihorohoro hiatrika ny fitsaràna” izany.
Kanefa tena tsikerain'ny olona mafy tokoa noho ny resaka fanajàna zon'olombelona io fandaharanasa io, sy ilay lalàna vaovao mampiady hevitra mikasika ireo lalàna momba ny asa iandraiketan'ny tafika miandry ny sonian'ny Filoham-pirenena amin'izao fotoana izao, tsikera avy amin'ny olona toy ny mpahay lalàna hatramin'ny akademisiàna mankamin'ireo Senatera sy ireo blaogera. Raha ny marina dia manakana ireo voafonja tsy hahazo fitsaràna, mahatonga azy ireo ho mora iharan'ny fampijaliana sy fampanjavonana ireo fanagadrana miafina. Araka ny naboraky ny tatitra vao haingana navoakan'ny Filankevitr'i Eoropa, anjatony voarohirohy no latsaka tao anaty fandriky ny “tranonkala erantany” mikasika ireo fakàna ankeriny tsy araka ny lalàna, ireo fanagadrana ary ny famindràn-toerana.
Na izany aza, na eo aza ireo ampamoaka naparitaka be ho fanta-bahoaka tamin'ny media toy ny Washington Post sy ny ABC News izay efa ho herintaona izao, amin'ny fampiharana dia sarotra ny hahalala marina ny toerana sy ny fomba itànana ireo nahiahiana ho mpampihorohoro. Maro amintsika no tsy vahiny amin'ireo sarinà fotodrafitrasa tantanin'ny Etazonia ao Guantanamo Bay, saingy tsy tena fantantsika marina izay mitranga lavitry ny mason'ny daholobe.
Ankehitriny, ao anatin'ity santionana lahatsary vao avy nalefa tamin'ny blip ity, afaka tetezinao ny toerana iray izay nitazonana miafina olona iray nahiahiana ho tafiditra tamin'ny fampihorohoroana.
Ho an'ireo sasany aminnareo manohitra hoe “ka efitranonà hotely anie io e! “, tena marina ny anareo tsy azo iadiana hevitra – toy efitrano raitra iray, mampahazo aina ao anaty hotely avo lenta iray ao Skopje, tanàna renivohitr'i Makedonia. Saingy tao anatin'io efitrano io ny olom-pirenena Alemàna iray, Khaled El-Masri, izay tsy mbola voahenjika taminà heloka bevava mihitsy, no voatana miafina nandritra ny 23 andro, ny volana Janoary 2004. Tao no niambina azy akaiky ireo mpiasan'ny fitsikilovana – eny fa na dia mandeha mankany amin'ny trano fivoahana aza – tsy nahazo fitsarana na ny fanampian'ny masoivoho, nohadihadiana tsy tapaka mikasika ny silamo mahery fihetsika, ary voarahona tamin'ny basy teo an-tampon-doha raha nikasa hitsoaka.
Avy amin'io efitranon'ny hotely io no nanolorana ho an'ny CIA an'i El-Masri ary nentina tany Afghanistan, izay nandaniany ny efatra volana manaraka tao anaty efitrano figadrana iray maharikoriko.
Rehefa notaterina voalohany tao amin'ny New York Times ny tantaran'i El-Masri tamin'ny 2005, maro ireo fanontaniana nipoitra tampoka manodidina ny natiorany sy ny hoe hatraiza no nahavoarohirohy ireo sampana fitsikilovana avy amin'ny firenena vahiny isankarazany. Fanazavàna iray malaza ny hoe azo izy taorian'ny hadisoan'ny CIA, izay nahasaringotra ny Makedoniàna sy Alemàna. Tamin'ny volana Desambra 2005, nampiditra raharaham-pitsarana tao Etazonia mikasika ny filohan'ny CIA teo aloha i El-Masri, izay tokony ho nentina niadiana hevitra teny amin'ny fitsaràna fampakarana didy nataon'ny ACLU ny volana taorian'izay. Mandritra izany fotoana izany, nisy famotopotorana iray nataon'ny Parlemanta Alemàna hahafantarana raha toa tafiditra tao anatiny ireo sampam-pitsikilovana Alemàna – na nisy aza ny fanamafisan'ny governemanta hoe tsy nahafantatra velively akory ny mikasika ilay raharaha raha tsy efa tafaverina an-tanindrazana El Masri.
Raha betsaka ireo firenena eoropeana no afaka niditra tao anatina fanafenana tsotra izao ny andraikiny ho “mpiara-miasa amin'ny heloka bevava” ataon'i Etazonia, toa miharihary izao ny fitsabahan'i Makedonia. Tonga niaraka tamin'ireo fandàvana ampahibemaso azo novinavinaina nataon'ny Governemanta Makedoniana ireo ireo fiaikena avy amin'ireo mpiasam-panjakana taloha hoe notànan-dry zareo tamin'ny anaran'ny CIA i El-Masri. Nanoratra tao amin'ny Vreme, ny mpanao gazety Makedoniana, Aleksandr Bozinowski, naneho hoe “mametra-panontaniana foana mikasika ny fiandrianam-pirenen'i Makedonia” ireo ahiahiny momba ny haavon'ny “fifehezana” matetika ataon'ireo sampam-pitsikilovana vahiny momba ireo olan'ny fiarovam-pirenena, .
Na ahoana na ahoana, na mino an'io na tsia, ny fahitàna an'io efitranonà hotely io dia manome ny singa fototra iray ao anatin'ilay piozila, mikorontana amin'ity hetsika notarihan'i Etazonia ity. Nahazo rakitadidy voasoratry ny tanan'i El-Masrr momba ilay efitrano ireo mpanao gazety nanao fanadihadiana avy amin'ny sehom-baovao, an'ny fantsona fahitalavitra alemana ZDF’s “Frontal 21″ (naseho tamin'io rohy ACLU io ho toy ny fahatelo tamin'ireo kisarisarinà famonjana) niaraka tamin'i Skopje ary nahita fifandraisana. Avy eo nahamarika endrika betsaka avy amin'ilay hotely tao amin'ny tranonkalany i el-Masri.
Izay liana te-hahalala bebe kokoa dia afaka mamaky ety anaty aterineto ny antsipirihan'ny fanambaràna nataon'i Khaled El-Masri ho an'ireo fitsaràna Amerikana. Ny lahatsariny, vavolombelona mampihetsi-po sy mandresy lahatra ihany koa dia miseho ao anatin'ny fanadihadiana 2006 an'ny WITNESS “Outlawed” , izay sarimihetsika mila jerena amin'ireny fotoana misahotaka ireny. Ho faly izahay handre ireo fanehoankevitrareo momba ity sarimihetsika ity na momba ireo endrika hafan'ity lahatsoratra ity, eto ihany, eo amin'ny ambohipihaonana vaovaon'ny Human Rights Video.
Niaina dona ara-tsaina iray tena nampivadika atidoha i El-Masri momba ny fampijaliana fampibabohana, fanerena hisakafo sy ireo hafa fanaovana tsinontsinona ny haja ama-boninahiny – ny ankamaroan'ireo dia nitranga tao anatin'ny toerana manokana “efitrano figadrana kely maloto tena maloto” tao Afghanistàna. Nefa mbola tsy misy dikany ny fitazonana azy tao anatin'io efitranonà hotely mahazatra tao Makedonia io, satria mampiseho amintsika izany fa tsy ao ambadik'ireo fefy vy irery ihany akory no misy ireo fanosihosena ny zon'olombelona afenina, mangingina ary miafina.
Ity lahatsoratra ity dia anisan ny Zon'olombelona an-tsary, andrana alefa ho an'ny vohikalany an-dahatsary ho fiarovana ny zon olombelona. . Lahatsoratra rehetra